GAADDIDDUUJIRAACHISUUN ABBAA JIRAACHISUU DHA -
Dhiheenya kana, qilleensi Oromiyaa milkiilee injifannoo walitti dhaabaniin misiraachoo bilisummaa bubbisaa jira. Kuni, umriin Wayyaanee fii dargaa isii gabaabbachaa dhufuu labsa. Haalli kuni, haala mootummaan Hayle Sillaasee dhuma bara 1974 keessa limtee fii kan tan Dargiin bara 1990 irraa kaasee keessa lixxeen wal fakkaata. Yaroo sanitti, lachuu, waa hunda caalaa wanni barbaadaan hara-galfii arkachuu dha ture. Garuu, qabsoon diddaa bulchiinsa isaanii irratti godhamaa turte waan fedhan laachuuf dhabdee, inumaa, daran itti hafarfamuun onnee hafuura barbaaddu waakkatee, du’a isaanii saffise.
Haala Dargii kan gaafa sakaraataa san Wayyaaneen sirritti beeyti. Yaroon, yaroo haala Oromiyaa keessa itti seenuuf mala dhawachaa turte. Dukkana itti deemaa jirtuuf if qopheeysuuf, maloota hedduu tarrifte. Isaan keessaa tokko ummata Oromiyaa tiif dhaaba gaaddidduu (OPDO) gurmeeysuu dha. San booda, odoo hin turin, Gaaddidduun meeshaa yaroof dhimma itti baatu qofa tahuu abdachiisuun, warra wal’aansoo bilisummaa tiif qabsaawaa turan if waliin Shaggar nayxe. Yaroo kana gootu, qabsaawota kana isaan malee ijaa fii gurra akka hin qabnee fii hayyoonni biyyichaa isaan qofa taachaa, hamma gariin if shakkan, garii niis dhugatti fudhatanii hamma mahandisa (architect) Mootummaa Ceehumsaa ti ifiin ja’an takka, gurraan duuchaa turte. Aangoo akkaasiin qabatte, haalaa fii yaroo waliin tooftaa fii tarsiimoo isaa jijijjiirraa hamma yoonaa geeyse. Baroota dila aangoorra jirtu kana, qarooma aangoo horsiiserratti caalaa dabalachuun isii nama hin mamsiisu. Dimshaashatti, Wayyaaneen, aangoo qabachuu fii hamma yoonaa irra turuurratti, dhibdeelee ammaa-amma itti dhalataniif tooftaa irra aansu yaroo fudhattu, ija cufaan odoo hin taane – xiinxala cimaan; yaada isii qofaan odoo hin taane – kan warra akka isii gorsaniif ifiin naanneeysiteen tahuun gabaasaa warra isitti dhihaatanii ti.
Tooftaa Wayyaanee aangorra tursiise keessaa tokko dhaabota Gaaddidduu godhatte dhiheenyatti tooyachuu fii miseensota naaduraan hordofaa amma-amma gamaaggamuu dha. Haala kanaan, warra sadarkaa hoogganummaa Gaaddidduuleetti ol baaftu mara akka ilmaan isii beeytutti beeyti yo ja’ame dhaadheeysaa hin tahu. Akki kuni, hunda daran, kan Oromoo irratti akka cimuus shakkiin hin jirtu. Haalli Oromoo murteeysaa jireenya isii waan taheef, warra caasaa Gaaddidduu keessa jiraniin alattiis, Oromoota biyyaa fii ala jiran ija dooyyoo (spy agent) hedduu tiin tooyachaa as geeyse. Odoo akka ammaatti, saree masgiida seente hin tahin duratti, gunaa dachii fii lafa manaa tiin maadhee bakka-bakkatti dhaabbatteen, hawaasa biyya alaa keessa loohuuf ijibbaanni goote gudda. Ijibbaata kana akka milkeeysaniif hoogganoota Gaaddidduu bifaa fii sammuu bareechitee yaro-yaroon keessa bobbaasaa baate.
Duuba, arra, caasaa fii maadheen aangoo abadiif biyya keessaa fii alatti jaaraa baate, akkaataa isiin hin eeginii fii itti hin qophaawiniin, fiixeensa aduun itti baate tahee, tabaroon akka shaamaatti harkaa baqaa jira. Haala akkanaa keessatti, warri akka isii, haxxeen, wanni godhan maloota hanga ammaa dhimma itti bahaa bahan, kan qaroon hanqatee doofaan itti dammaqe gatanii, tooftaa haarayaan dhufuu qofa. Wanni amma Oromiyaa keessaa dhawwaaqaa jiru mala haalli kuni dhalch. Arra, warra ajaja isii gaaffii takka malee waggoota dila kana hujiirra oolchaa bahee tu; warra gabrummaa, ajjeechaa, araraafamaa fii gudeedama lammii tiif riqicha tahaa fii turee tu, ummata Oromoo tiif anaannatoo tahee as bahe. Nama waggoota soddoomii oliif boojihamaa isaanii tahee tu, akka waan amma hirriibaa dammaqetti, “waan ummanni kiyyaa fii dhaabni kiyya salphatee fiin aangoo gadi lakkise,” kan ja’u tahe. Mee kan ummataa haa hafuu, kan aangoo tiis haa itti fakkeeyfamuu, kan dhaabaa ammoo, waan takkaa kan isaa hin turin, kan abbaa qabuun kiyya jachuun isaa safuu miti? Kuni tooftaa haaraya isaa fii dhaabni inni kiyya ja’uun hawaasa Oromoo waliin hidhata haaraya akka uummataniif karoorfame.
Karoora kana hujiirra oolchuuf, Gaddidduun, akkuma baroota dila kana godhaa bahanitti, waan abbaan qu’achiisee fii itti fakkeeyse, dooyaa fii TV haala kanaaf qopheeyseef irratti bahanii dhawwaqu. Lammii dhaan, arra nuu tu isiniif anaannataa, isin, “maalo! hiriira fincilaa dhaabaa,” ja’anii hujii isaanii tan diina jalatti lammii tasgabbeeysuu bakkaan gayaa jiru. Akka waan lammiin isaan deeggaraa turetti, isaanirrattiis irkachaa beheettii, qaanii malee, afaan guutuun, TV-rratti, “ummanni Oromoo ammallee dhaaba kanarraa abdii hin kutanne,” ja’anii dhawwaaqu. Kuni, qabsoo ummanni Oromoo gadhaa jirutti qoosuu dha. Dammaqiinsa, qaroomaa fii murannoo ummanni bilisummaaf horan tuffachuu dha. Warri kuni, zaliilaa ummanni Oromiyaa keessa jiru arkaa hin jiran. Lammii mirga isaanii waan falmataniif kumaatamaan mana hidhaa keessatti cafaqamaa jiran quba hin qaban. Ummata gooftaan isaanii karaa Abdi Illee tiin handuuraa isaaniirraa buqqaaseef onneen hin butamne. Barattoonni Oromoo kofa Abdi Illee jala seenuu diddaaf waywaanni godhaa jiran dhimma isaan laaluu miti. Kan isaan hiirriba dhoorkaa jiru, haala fincila diddaa gabrummaa kan sammuu gooftaa bowwaasaa jiru irraa itti dhaaban qofa. Kanaaf, walgayii walitti dhaabbatteen, ummata hujii waakkataa jiru. Kana godhuun isaanii yo abbaan jiraate qofa gaaddidduun jiraattii waan gooftaan irra daddeebi’ee hubachiisuu fi.
Haalli Gaaddidduu kan ammaa kuni, guututtillee tahu baatu, haala gaafa Wayyaneen Qinjjitiin moohamte booda isaan qabaachifteen wal fakkii qaba. Jarri gaafas filmaataan moohamuu akka ajaa’ibaatti fudhatan. Akkuma laalcha Wayyaanee kan gaafasiitti, Oromoo fii Amaarri yoomiyyuu diina. Kanaaf, filmaata godhame keessatti goobaan galuun waan if amansiisani. Garuu, bu’aan filmaataa faallaa tilmaama isaanii tahee arkame. Akki san baaraga keessa naqe. Sanirraa ka’uun, dabballoota Gaaddidduu kanneen ummata Oromoo akka diinaatti akka tooytan leenjisaa bahan, filmaata booda, hanga ummanni jara shakku takka, fuula jijjiirrachiisan. Namni umriin lafa bulee haala san daawwate kanaaf ragaa ni bahu. Ammaas, haaluma saniin, jarummaan ji’oota jibir dura, tarrisni qubee afaan Oromoo iaan duubatti karoorfame, diddaa saniif horaniif, ummata Oromoo ija diimtuu agarsiisaa bahan, lafumaa ka’anii, gooftatti fincilanii, sab-boonota tahanii as bahuun, yo tooftaa Wayyaanee hin taane, raajii dha.
Ee! dhaaba Gaaddidduu keessaa, dhalootarraa hamma ammaatti, dabballeerraa hamma hoogganaatti, sababaa adda-addaa tiin warri keessaa bahanii saba gananitti deebi’an takkaa dhabamanii hin beekan. Sabni niis warreen akkanaa yaruma hundaa qoma banatee simachuu hin dhiifne. Yaroo diinni injifatamaa dhufu jaleen duuyda itti garagalan heddommaachaa akka dhufan seenaan mirkaneessitu heddu. Ummataa fii qabsaawonni haala akkasii kan kaluu jiruuf if qopheessuu qabu. Hangasuu garuu, warra diinni afaan mimmi’eessee isa dura kayaa jiruun odoo hin sobamnee fii hin jeeqamne, gaaddidduu jiraachisuun abbaa jiraachisuu tahuu hubachuun, qabsoo hamma bilisummaa dhugaatti finiinsuu qabu.
Oromiyaan Ni bilsoomti!